Akka oduu conference guyaa har’a, Iowa Governor Kim Reynolds dhukubni Covid-19 akka balbal’ataa dhuf | KWIT
Akka oduu conference guyaa har’a, Iowa Governor Kim Reynolds dhukubni Covid-19 akka balbal’ataa dhuf
By Fatiya Adam • Nov 19, 2020
Oromo News 11.19.20
Oromo News 11/19/2020
Akka oduu conference guyaa har’a, Iowa Governor Kim Reynolds dhukubni Covid-19 akka balbal’ataa dhufe himan.
Iowa keessati namni dhukuba Kanaan qabame kuma 200 ol kan taruu fi namni waliigalatti duemmoo kuma lama akka tare himen.
Ogeessi fayyaa State akka jedheti namni haarawa due 38 akka jiruu fi ganama kana namni haarawa qabame 4,200 akka ta’an hime, Governor akka jedhetti ummani Iowa seera dhukubicha addaan fagaachu fi maski fuula godhachuu akka aadefatan hime. Akkasumas ummani ayyaana irrati nama muraasa lakkoofsa akka taes himte.
Bakki mana keessati walgahan kan akka cidha, duaa, matii walitti qabamu, ayyaana, waliigaltee fi sababa walitti qabama biraatifis nama 15 qofa akka tauu qabu himan. Reynols seeri kun wayta ayyaana Thanksgiving irrati akka oolu qabu himte.
Reynolds akka jetteti jiraattoni waa’e naanawa isaani beeku qabu akkasumas nama walitti qabamus hir’isuu qabu. Akka isiin jetteti naanichi seera baratame akka kaahaniifi kaayyo mitigation tarkaanfi fudhachuu fi akkasumas isiin yoo kan barbaachisu tae dail akkasumas yoo state jijjiirama haarawa aerguu jalqabus dail akka gootu himte.
Akkasumas guyyaa har’aa governor Iowa beekamaa kan Governor Tom Vilsack fi Former university Iowa Wrestling coach Dan Gable akka ummaii hundi haguugi fuula godhataniifi addaan fageenya ufii eegatan himan simana isaa waytaa demaan.
Guyaa har’a, Sioux land District health akka jedheti se’aati 24 keessati namni haarawa qabame 133 akka dabale himan. Woodbury County keessati dhukkubni akkan balbal’ataa deemu jira.
State Iowa namni sababa Covid-19 guyyaa tokkoti du’an akka baaye taa’e gabaasan himan.
By Fatiya Adam • Nov 18, 2020
Oromo News 11/18/2020
Deparmantiin mana fayyyaa Iowa akka mullisuuti seati 24 keessati sababa virus kana namni 40 akka due hime.
Qorannoon bultii 14 keessati godhame akka mullisuti Woodbury County keessati parsanti 23.5% akka gahe mullisa. November 1ffaa 18% ture akkasumas jia dura parsantii 15% ture.
Oromo News: 11.17.20
By Fatiya Adam • Nov 17, 2020
Oromo News 11/17/20
Deparmantiin mana Fayyaa Iowa se’aati 24 keessati namni haarawa sababa covid-19 kan due nama 35 yoo tau haarawa kan qabame mmoo 3,500 dha. Dabalataanis namni baayen hospitaala galee jira.
Akka oduu conference guyyaa har’aati, Governor Kim Reynolds jetetti haali dhukubicha yoo kan hin jijjiiramini virus toohachuudhaf seera dabalataa akka murteessan himan.
Akka isiin jetteti dhukkubsattooni hospitaala keessa jiran akka dhukubni kun jalqabe irraa baaye akka guddate jiru himan.
Oromo News: 11.16.20
By Fatiya Adam • Nov 16, 2020
Oromo News 11/16/20
Governor Kim Reynolds guyyaa har’aa se’aati 6: 05 irraa waa’e Covid-19 jiraattota Iowa dhaan live dhaan kan ibsu ta’a. oduu biro isaati baate akka jettuti beeysisni kunis akka Covid-19 toohatamuuf tarkaanfi fudhatamuufi Waa’e jiraattota Iowa virus ufirraa eegan barachuudhaf kan godhu ta’a.
Nebraska keessati, Gov. Pete Ricketts oduun guyyaa har’aa irrati akkajehetti seera haarawa fi seera
By Fatiya Adam • Nov 13, 2020
Oromo News 11/13/20
Nebraska keessati, Gov. Pete Ricketts oduun guyyaa har’aa irrati akkajehetti seera haarawa fi seera fayya wan irraa dhoogaman karorra dhukubsattoota Covid-19 dhaaf baase dhukubsatoota siree hospitaala jiran parsantii 25% fi san ol ta’aniif.